20 Talooyin waxtar leh iibi isticmaalay iPhone at qiimaha ugu wanaagsan
Haddii aad rabto in aad naftaada u hesho model cusub ee iPhone heli karo, ama waxaad u baahan yihiin lacag caddaan ah qaar ka mid ah, ama waxaa laga yaabaa in aad kaliya heshay phone cusub sida hawl hadiyad ah, oo aad doonayso in laga takhaluso hore mid ka mid ah, halkan waxaa ku qoran liiska 20 Talooyin muhiim u ah sidii ay u iibiso iPhone ah loo isticmaalo qiimo ugu fiican:
Go'aanso sababta aad u iibiso
Iyadoo ku xiran sababta, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inuu ogaado qiimaha qiyaasta hore, oo hubi in uu idiin samayn doono. Sidoo kale, aanad gelin karaa sharaxaad sheyga, iibsada inta badan waa cajiib ah oo ku saabsan sababta ay u go'aansatay in ay iska bixin. Ma sababta oo ah qaab ciyaareed? Ma waxaad u malaynaysaa ku saabsan gadashada mid cusub?
Eeg dhow telefoonka iyo hubiso in aad ogtahay waxa aad iibiso
Xoq kasta oo bal ogow kasta oo saameyn ku yeelan doono qiimaha ugu dambeeya ee ah in aad awood u yeelan doonaan in ay weydiiso. Oo Maalqabeendda in la xuso in iPhone la screen ka jabay ma inay iska iibiso. Inkastoo waxaa kale oo jira laba doorasho ee kiiskan.
Raadi model saxda ah aad isku dayeysay inay iibiso
Model ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doono qiimaha kama dambaysta. The cusub waa, weyn ee sicirka aad ka heli doonaa. Iyo model kasta la Timaadda sooca ah oo kala duwan, sidoo kale waa in la tixgeliyo.
Tag online iyo hubi nooc ka mid ah iPhone aad rabto in aad iibiso
Waxay kugu caawin doontaa inaad ogaato suuqa. Raadi tusaale sida kaaga oo kale, oo leh sifooyin la mid ah iyo dawlad la mid ah malaha sida kuwaaga si ay qiyaasta qiimaha inaad u heli karto.
Hubi dukaamo online iyo dukaamada magaalada aad iibiya telefoonada used
Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ogaato waa kuwa doonaya in ay lacag badan ku siin, oo sidoo kale ku siin doonaa oggayn sida waxa si looga fogaado iyo waxa adiga kuu fiican.
Ka fikir qaadanaya waqti si aad u hesho baakadda asalka ah
IPhone isticmaalay in la iman baakadda asalka ah sida caadiga ah waxay leeyihiin qiimaha iibinta sare.
Uruurso wixii xog ah oo ku saabsan telefoonka ee aad awoodid
Raadi internet-ka ee tafaasiil farsamo ee aad telefoonka. Waxaad doonaysaa in aad hubiso in aad ogtahay wax kasta oo ku saabsan
Samee liis ah oo dhan sifooyinka uu leeyahay
Waxay kugu caawin doontaa inaad leedahay sharaxaad faahfaahsan ee alaabta ee marka aad go'aansato habka iibinta waxaad isticmaali doontaa. U hubso in aad ka mid ah dhammaan macluumaadka la heli karo in aad isugu iman karaan.
Qorshee waxa ay u ka hor
Sida caadiga ah waa ku dhawaad ​​fasaxyada Winter in resellers ku odhan dadku iibsadaan telefoonada ka badan sida caadiga ah. Sidoo kale waqti wanaagsan inay iska iibiso aad iPhone waa wax yar ka hor hab cusub oo la sii daayay, ku dhawaad ​​hal bil ka hor. dadka isticmaala iPhone rabto in aad hesho model cusub, oo dadka qaar rabto in aad hesho iPhone ah qiimo fiican, xitaa waa mid ka mid ah loo isticmaalo, sidaas darteed waa xaalad guul-guul ah.
Isbarbar dhig u ah dalab ku goobood oo kala duwan oo bixiya iibiyo adeegyada
Waxaa jira goobo badan oo online in iibsan doonaa iPhone, sida gazelle.com, yourenew.com, usell.com, iyo kuwo kale. Qiimaha in aad heli doonto kala duwan mid kasta waxaa ka mid ah, iyo in ay sidoo kale ku xiran tahay gobolka aad telefoon.
Go'aanso haddii aad rabto in aad isticmaasho adeega iibinta ama in la iska iibiso naftaada
Iibinta aad iPhone in reseller ah ka heli doono dhammaan dhaqdhaqaaqa ee xabadka, laakiin waxaad heli doontaa lacag ka yar shay aad iibiso, ayaa dhanka kale, waxaa jira goobaha, sida ebay.com ama craigslist.com, halkaas oo aad ka si toos ah wax iibsadaa iibin karaan. Tani waxaad ka heli doontaa dheeraad 200-300 $, laakiin waa waqti iyo si ka sii adag tahay.
Go'aanso waxa bixinta hababka in idin aqbali doonaa
Haddii aad go'aansato in aad si toos ah u iibiso, waa in aad go'aan ka hababka lacag bixinta idin aqbali doonaa. Waxaad u leeyihiin in ay iyaga oo dhan ku cad sharaxaad aad bixiso shay leeyihiin. Qaar ka mid ah dadka iibsanaya dooran lahaa shay oo kaliya sababtoo ah ma heli habka lacag bixinta ku haboon iyaga u.
Go'aan ku saabsan habka ay u maraakiibta ku siin doonaa
Waxaa jira fursado badan halkan. Waxaa fiican in aad bixiso saddex ama afar hab oo maraakiibta, si ay macaamiisha ah ayaa dareensan in si xor ah u dooran ugu fiican u shaqayn doonaa inuu isaga u / iyada.
Isku day in aad telefoon quful hor iibin
Qaar ka mid ah telefoonada ah, waxay ku xiran tahay xaggee ayaad ka heli, laga yaabo in la xiraa si network gaar ah. Taas macnaheedu waa in kaliya loo isticmaali karaa kaarka SIM ah in ay ka shaqeeyaan in broadband gaar ah. Haddii taasi dhacdo in la telefoonka, isku day in aad hesho waxa xidhin. Waa lacag si ay u furo, laakiin waxaad kordhin doontaa fursadahaaga ah in la iibiyo telefoonka ee heerka sare ah.
Go'aanso waxa maala ku siin doonaa telefoonka
Waxa kale oo aad ku siin doonaa xeedho ah, cable xogta, ama dhego gashi? Haddii aan, waa in aad sheeg in tilmaanta.
Haddii iibsadaha uu maanka ku beddelo, idin aqbali doonaa celinta?
Tani waxay la mid kale oo fiican in la tixgeliyo. Dadka qaar waxay dareemaan ammaan si ay u iibsadaan shay hadii ay fursad u baddalaan maskaxdooda haddii ay jiraan wax in aanay jeclaan leeyihiin. Sida caadiga ah dhawr maalmood ka jira ganaax, malaha ilaa toddobaadkii, laakiin waxay ku xiran tahay in aad on. U hubso in aad sameysato cad oo ku saabsan siyaasadda lacagta in aad ka bixin (ama ma) iyo in ay taasi dhacdo, oo bixin doonta maraakiibta
Saxiix ka mid ah xisaab-aad oo dhan
Tani waxay la mid tahay oo keliya si aad u hubiso. Inkasta oo aad nadiif u tirtiri doonaa iPhone, iyada oo loo adeegsanayo taxadar laga yaabaa in aad rabto in aad gabyi oo dhan kalfadhi oo firfircoon aad, haddii aad isticmaasho in ay galaan sirta ah mar kasta oo aad soo geli app ah ...
U hubso in aad dib ilaa xogta aad ka iPhone
Telefoonada Out ayaa noqotay asaxaabta maalintii oo dhan our. Waxaan leenahay sawirada, music, fariimaha, e-mail, iyo dhammaan faylasha kale oo Chine in aan u baahanahay. Haddii aad qorshaynaysid in aad kala adiga oo iPhone laga yaabaa in aad rabto in aad dib ilaa files, si aad u hubiso in aad weli iyaga ka heli kartaa xitaa ka dib markii aad iibiso telefoonka.
Hubi in ay tirtirto taariikhda telefoonka aad
Isticmaal mid ka mid ah barnaamijyadooda la heli karo, sida Wondershare SafeEraser, in ay nadiifiso taariikhda telefoonka aad. Si fudud u isticmaalaya badhanka Delete ma kaa caawin doona, tan iyo waxaad isticmaali kartaa barnaamijyadooda kala duwan si loo soo celiyo dukumentiyada la tirtiro. Wondershare SafeEraser tirtirtaa wax walba oo aan ka tagin wax raad kasta, iyo wax kasta oo aan fursad u soo kabashada. Taasi waa sababta marka kowaad waa inaad u sameeyaan gurmad ah.
Ma taqaan waxa aad telefoon soo socda waxa uu noqon doonaa?
Ka hor aad iibiso phone jir waa in aad go'aan ka gaarto waxa ay noqon doontaa aad telefoon soo socda, haddii aad hore u leedahay mid ka mid ah oo cusub, iyo in aad rabto in laga takhaluso jir ah. Ama haddii aad go'aansato in aad aado phone-yar, taas oo haddii aad ka boodi kartaa marayso wadajir.
> Resource > masixi > 20 Talooyin waxtar leh iibi isticmaalay iPhone at qiimaha ugu wanaagsan